Solar Panel, Power Inverter, Solar Charge Controller, PWM Controller, mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy any Shina
Fiarovana karama ambany, fiarovana ny tontolo iainana, famokarana angovo.
Longchi - fitiavana africa
Amin'ny alina, amin'ny fampiasana ny rafi-pamokarana maivana manara-penitra
Solon-tsolika ho an'ny fampiasana trano
soleran'ny soleran'ny angovo
hery solon'ny tokantrano
hery solon'ny masoandro
rafi-masoandro momba ny masoandro
Zhejiang Longchi Technology Co., Ltd. dia ny fanangonana ny fampiroboroboana ny angovo avy amin'ny masoandro, ny famokarana, ny varotra ary ny asa fanorenana vaovaon'ny orinasa. Ny orinasa henjana momba ny famokarana angona, ny vokatra sy ny fahamarinan-toerana, dia nandany ny fanamafisana ny rafitra ISO9001 momba ny kalitao, ny vokatra fototra amin'ny tatitra fanaraha-maso tsara ny SGS, ny CE, ny tatitra ROHS ary nahazo ny mari-pahaizana manokana.
Ny famokarana dia mandrakotra faritra 56667 metatra, toerana fanorenana 55935 metatra tora-droa, miaraka amin'ny renivohitra RMB 20million.
Ny vokatra fototra dia ny PV solar module, ny famokarana angovo herinaratra, ny 80% ny vokatra dia entana any Africa Europe, Amerika Avaratra, Aostralia. Ny Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo-Atsinanana, noderain'ireo mpanjifany avy any an-toerana sy avy any ivelany, dia tena "fiarovana amin'ny angovo ho an'ny tontolo iainana maimaim-poana amin'ny famokarana angovo maitso maitso." Ny orinasa manana mpivarotra maro any an-trano sy any ivelany, dia nahazo ny ankamaroan'ny mpanjifa ny fanekena sy ny fiderana. vonona hanompo tolotra voalohany amin'ny kilasin'ny mpanjifa vaovao sy vahiny ary an-tanan-tanana mba hananganana fiainana "sunshine". Hamaky bebe kokoa
Manome torolàlana tsara sy serivisy fanohanana vokarin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay.
Hanolotra serivisy azo itokisana haingana, mandaitra ary sarotra, mba hahatanteraka izay ilain'ny mpiserasera.
Manampy mihoatra noho ny 3,000 mpanjifa maneran-tany isika - mihoatra noho ny 30% amin'ireo mpanjifa lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny varotra manerantany ao amin'ny foibeny fandraharahana ary hamadika ny angona sosialy ho fandraisana fanapahan-kevitra matotra.
Ny angovo avy amin'ny masoandro dia mareva-danja sy hafanana avy amin'ny Masoandro izay mifehy ny fampiasana ny karazana teknolojia tsy manam-pahaizana toy ny starter, ny fotovoltaika, ny kintan'ny tosi-drà, ny kintana, ny ranom-boasary ary ny fiasàna simika. Hamaky bebe kokoa
Mandra-pahoviana ny faharetan'ny solaitraoran'ny masoandro
25 taona (na mihoatra). Izany dia mety ho antoka ara-barotra ara-dalàna avy amin'ny mpamorona biby iray. Raha ny tena izy, ny fikandran'ny kintana dia haharitra ela kokoa noho izany: ny fanomezan-toky mahazatra dia miantoka ny fisehoana dia afaka miasa amin'ny faha-valo ambinifolo amin'ny ambaratongam-pisiany voamariny raha dimy amby roapolo taona. Ny fandinihan'i NREL dia maneho fa ny ankabeazan'ny sehatra dia mbola manu ... + Read more
Firy ny solaitraingan'ny masoandro no ilainao ho an'ny tranoko?
Ny famaritana ny haben'io rafitra solosainao io dia manomboka amin'ny fanontaniana mora: inona no asan'ny kintana maromaro mila ahy? Satria ny vahoaka maniry no manome ny angovo ampy hanesorana tanteraka ny volavolan-dry zareo, ny dingana voalohany dia mamaritra ny rafitra maotera afaka manova ny hery ampy hanatanterahana ny fampiasana herinaratra anao ... + Read more
Ahoana ny fiasan'ny solosaina?
Tafiditra ho toy ny famatsiana angovo azo antoka mandritra ny taona maro, ny kintana dia mamelatra tampon-trano sy marika famantarana, ary hanamora ny fitazonana ny orbiter powered. Na izany aza, inona no asa atao amin'ny kintana? Raha tsorina, ny arsivan'ny masoandro dia miasa amin'ny alàlan'ny famelana ny photons, na ny solon'ny masoandro, ny mandondona ny elektronika tsy misy atôma, miteraka herinaratra. ... + Read more
ADD.: NO.20 Road Guodao Avaratra, Shangqiang Industrial Area, Daixi Town, Wuxing distrika, Huzhou City, Zhejiang Province.
Copyright © 2019 Teknolojia Zhejiang Longchi Zo rehetra voatokana.